कला/साहित्य – Page 11 – erupse.com
अ–हाईपोथेसिस पुस्तको समिक्षा
बुधबार, जेष्ठ १६, २०७५ मा प्रकाशित
बागलुङ, १६ जेठ– बागलुङ नगरपालिका–१० भकुण्डेका उदित कुमार थापाले लेखेको पुस्तक अ–हाईपोथेसिसमाथि मंगलबार एक समारोहका सहभागीले टिप्पणी गरेका छन् । समसामयिक विषयबस्तुलाई आधार बनाएर लेखीएको पुस्तकको समिक्षा गर्न आयोजना गरिएको कार्यक्रमका सहभागीले पुस्तकको टिप्पणी गरेका हुन् । वर्तमान नेपालको..
लकाश पौडेल मुहार यो बताउने दिली कुरो लुकाउँने छ प्रेमको कथा-व्यथा तनै यसै सुकाउँने न रातमा निँदै छ ता न बातमा खुसी पनि अधीन छैन यो मनै रुँदै कतै फुकाउँने..
मृत्युको पीडा कति कठोर हुन्छ, त्यो कि भोग्नेलाई थाहा हुन्छ कि मृतकका आफन्तलाई । त्यसमा पनि अल्पायुमै हुने मृत्युले उसको परिवारलाई कति चोट दिन्छ, त्यो भोग्नेले मात्रै अनुभूत गरेको हुन्छ । प्रकाश सपूत त्यस्तै एक पात्र हुन्, जसले अकालमै आफन्तको मृत्युवरण देखेका छन् । परिवारको रंगीन सपना सजाउने अभिलाषा..
सबु सुवेदी “साँच्चिकै तपाईंले पाँच जनासँग प्रेम गर्नुभयो ?” “अँ…गरेँ ।” “बिहे त कसैसँग भएन नि, है ?” “उनीहरुले मलाई छाडे ।” “त्यसो भए पाँचपाँच जनासँग बे्रकअप भयो तपाईंको ?” “त्यसै भन्नुपर्ला ।” “पाँचै जनाले छाड्नुको कारण ?” “कारण थाहा भएको भए गल्ती सुधारेर म छैटौंका लागि तयार हुन्थेँ ।” मेरो..
प्रकाश ‘देव’ खड्का प्रेमिकाले धोका दिएपछि अरब भासिएको विशाल तीन वर्ष कठोर परिश्रमपश्चात स्वदेश फर्कन्छ । बुबा आमाले छोराको बिहे गर्दिउँ भनेर सुशील कन्या देखाउँछन् । आफ्नो प्रेम कहानी र तड्पाईंको पीडा भुल्न नसकेको ऊ, उनको मुहार हेरेपछि भने शरीरमा अनौठो बिजुली सञ्चार हुन्छ । खुसीले निभेको मनको बत्ती..
सूचना तिमल्सिना यादको लहरी बनेर तिम्रो सम्झना आइरहँदा फेसबुक पल्टाउँछु । तिमीले केही नलेखी डट दिँदा त्यो आशाको झिल्को पर्दाफास हुन्छ र तिम्रो उत्तरको प्रतीक्षारत रहन्छु । तिमी डटलेखि अड्किरहन्छौ । अनि म अन्योलतामा तड्पिरहन्छु । म तिमीलार्ई लेख्न चाहन्छु, मेरो मुटुको धड्कन, तिमी डटमा सीमित हुँदा के..
कविता : शीतको गीत
मुक्ति गौतम तप्प तप्प खसोस् शीत बार्दलीबाट र म सुनी रहौं त्यहि धुन बार बार ब्यूँझँदै निदाउँदै मेरो तन्द्रा ! सङ्गीत या गीत सुसाई या मन्द चिरबिर उछिट्टिएर आउँछ केही मेरो कानसम्म खसिरहँदा थोपा बार्दलीबाट उघारेर झ्यालका स-साना छिद्रहरु ! हावा मन्द चल्छ मिसिन्छ शीत खसिरहेको आवाजमा शान्त , ठूला..
दिलिप बान्तवा एक्कासी ऊ बडेमानको गेटवाला महल अगाडि आईपुग्यो। बिस्तारै गेटभित्र छिरेर मुख्य ढोका पार गर्दै विशाल बैठक हलको ढोका अघिल्तिर पुग्दा अचानक उसले कदम रोक्यो,किनकी त्यसभित्र जे हुँदैथियो ती सब बिचित्र थिए उसका लागि । हलिउड फिल्मको राजघरानाभित्रको दृष्य सेट जस्तै लाग्ने दृष्य देखिरहेको..
कथा-श्रीमती नभएका सर
विकास रेग्मी कहिले काहिँ रक्सी खाने आदत बसेको छ ज्यानमा । सिल भएको रक्सीमा त्यति रूचि जाँदैन । लोकल नै जिन्दावाद तर फेरि लोकल खान भट्टीको कोलाहल पनि मन पर्दैन । त्यसैले रात परे पछि सुटुक्क भट्टीमा गएर एक बियरको बोतलको एक सय पचास रुपयाँ तिरेर लोकल रक्सी लिएर कोठामा नै एक्लै खाने गर्छु । जिल्ला वन..
खिमानन्द कँडेल मैले केही वर्ष अगाडि दुई वटा किताबहरु लेखे । त्यसमध्यको एउटा थियो “लुटको खेती” । यस पुस्तकको कभर पेजमा मैले सिंहदरबारको फोटो राखेको थियो । मेरो स्पष्ट संकेत सिंह दरबार भित्र मौलाउँदौ व्यापक भ्रष्टाचार र यसले नेपाली समाजलाई पारेको व्यापक नकरात्मक प्रभाव प्रति लक्षित थियो वा सोझो..